Nokia dia eo an-tampon'ny taona voalohany mahomby | Androidsis
Nokia dia eo an-tampon'ny taona voalohany mahomby
Elvis bucatariu | | Finday
Ireo mobiles Nokia vaovao dia efa an-tsena nandritra ny volana vitsivitsy izao ary misoratra anarana amin'ny varotra tsara sy tsara kokoa, noho izany Herintaona tena tsara andrasana ho an'ny orinasa HMD Global, tompon'andraikitra amin'ny marika Finnish.
Araka ny efa fantatry ny maro, Nokia dia nibahana ny indostrian'ny telefaona finday tamin'ny taona 2000. Tamin'izany fotoana izany dia nanontany tena ny sasany sao misy olona afaka manala ny iray amin'ireo marika finday malaza indrindra eto an-tany.
Nanomboka teo dia zavatra maro no niova, satria miloka diso amin'ny Windows Mobile ny orinasa ary tsy maintsy nanidy ny asany nandritra ny fotoana kelikely izy, nefa miverina eny an-tsena indray ankehitriny eo ambany fitarihan'ny HMD Global.
Ireo finday Nokia vaovao izao dia mitondra ny rafitra fandidiana Android, ary navoakan'izy ireo aza a Nokia 3310 namboarina tamin'ny andro maoderina. Izy io dia terminal mora vidy ho an'ireo izay tsy mitaky fiasan-tsaina.
Taorian'ny fiatoana naharitra dia naseho tamin'ny telefaona finday voalohany ny finday voalohany tamin'ny volana febroary 2017 tao amin'ny Mobile World Congress, ary finday an-tapitrisany no namidy. Ny fanamafisana dia tonga tamin'ny 2 septambra ary manondro ny fivarotana ireo fitaovana efatra eny an-tsena ankehitriny eo ambanin'ity marika ity.
Ny maso ivoho IDC dia manombana fa ny marika Nokia dia efa eo amin'ny laharana fahadimy any Failandy, ary manerantany dia hanana ny anjaran'ny tsena 0,4%. Nanambara ity masoivoho ity fa, tamin'ny antsasaky ny taona, dia namidy smartphone 1.5 tapitrisa izy ireo.
Nanome toky an'izany i Tomi Ahonen, mpandalina Smartphone 0.1 tapitrisa no amidy tamin'ny telovolana voalohany, any Chine ihany. Avy eo, tamin'ny volana Jona, rehefa natao ny fandefasana finday eran-tany dia amidy 1.4 tapitrisa no namidy.
taty aoriana, tamin'ny telovolana fahatelo, ny HMD Global dia nivarotra fitaovana sahabo ho 2.5 tapitrisa manerantany, ary ho an'ny telovolana faha-efatra ny varotra 3.5 tapitrisa terminal dia azo voasoratra anarana.
Nanombatombana i Ahonen fa eo amin'ny làlana tsara ny orinasa miaraka amin'ny vinavinan'ny smartphone 10 tapitrisa mahery amidy tamin'ny taona voalohany niorenany. Tsy misy fisalasalana, endrika tsara ity izay azo antoka fa hihatsara amin'ny taona ho avy amin'ny fahatongavan'ny manaraka Nokia 2, Nokia 7 y Nokia 9.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Nokia dia eo an-tampon'ny taona voalohany mahomby
Ahoana ny fomba hamadihana ny Android ho fakan-tsarimihetsika
Kitiho ny lasantsy amin'ireto lalao fiara ireto ho an'ny Android